नयाँ शैक्षिक भर्ना : फेरि लिनन् अभिभावकत्व देशका ठूला मानिसहरुले ? – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
नयाँ शैक्षिक भर्ना : फेरि लिनन् अभिभावकत्व देशका ठूला मानिसहरुले ?
काठमाडौं । यो वर्षको शैक्षिक सत्र सकियो । खब नयाँ वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै छ । यसैसँग फेरि पनि जनताका मानसपटलमा सुरु भएको छ– के यस वर्ष पनि बालबालिकाहरुका लागि भर्ना अभियान चलाउलान् त देशका ठूलाबडाहरुले ? यो प्रश्न आम जनताको चासोको विषय पनि बनिरहेको छ । किनकि जाँदै गरेको शैक्षिक वर्षमा नयाँ भर्ना भाइरल नै बनिरहेको थियो ।
राज्यका ठूलाबडाहरुले गर्ने यो काम आफैमा प्रचारात्मक त हुँदै हो, त्यसमा पनि केही सहयोग र प्रेरणा पनि हो । रिपोर्टमा आएअनुसार अभिभावकत्व लिएमा धेरै अभिभावकहरुले एक वर्षसम्म आफूहरुले अभिभाकत्व लिएका नानीहरुको थोरै भए पनि हेरचाह गरेका थिए । यसले सानै भए पनि दायित्व निर्वाह गरेको अनुभूत गराएको छ ।
अभिभावकत्व लिने राज्यका हर्ताकर्ताहरुले पनि यो विचार गरेको हुनु पर्छ कि अब नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठाएर मात्र साच्चिकै शैक्षिक उन्नयन ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि एक छाक माछा लिएर खुवाउने हैन कि माछा मारेर खाने तरिका सिकाउनु पर्छ । त्यो भनेको जनतालाई आत्मनिर्भर हुने स्वरोजगारमूलक उद्योगहरुको स्थापनामा जोड र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास नै हो ।
तथापि तत्कालका लागि नेताहरुले शैक्षिक भर्नाका लागि के गर्छन् भन्नेमा जनताको चासो बढिरहेको छ ।